Organic SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ | Martech Zone
Organic SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
သောကြာနေ့, မတ်လ 7, 2014 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 14, 2017 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အကောင်းဆုံးကိုနားလည်လိုလျှင်၊ လုပ်ငန်းမှအကျိုးအမြတ်ရရန်ရှာဖွေနေသည့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုနားမထောင်ဘဲဂူဂဲလ်၏အကြံဥာဏ်ကိုသာရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရမည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ Search Engine Optimization Starter လမ်းညွှန်မှစာပိုဒ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဤလမ်းညွှန်ခေါင်းစဉ်တွင်“ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်” ဟူသောစကားလုံးများပါ ၀ င်သော်လည်းသင်၏အကောင်းဆုံးသောသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်၏ဆိုက်၏ visitors ည့်သည်များအတွက်အခြေခံသင့်သည်။ သူတို့သည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုအဓိကအသုံးပြုသူများဖြစ်ပြီးသင်၏အလုပ်ကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်တိကျသောအပြောင်းအလဲများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကလိုချင်သောရလဒ်များကိုမပေးနိုင်ပါ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုဆိုသည်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်မြင်တွေ့ရသည့်အခါသင်၏ကွန်ရက်၏အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းကို ဦး တည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏နောက်ဆုံးစားသုံးသူများမှာသင်၏အသုံးပြုသူများဖြစ်ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမဟုတ်ပါ။
ဂူးဂဲလ်တွင်ခိုင်မာသောအကြံဥာဏ်ရှိသည် သင်၏နောက် SEO အကြံပေးကိုငှားရမ်းခြင်းလည်း။ ဖောက်သည်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာအတော်လေးရိုးရှင်းသည်။ ဂူဂဲလ်ကိုသုံးထားသောကိရိယာများဖြင့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသုံးပါ၊ ထို့နောက်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာမှတစ်ဆင့်ထိုအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေပြီးမြှင့်တင်ပါ။ ဒါ SEO ဆိုသည်မှာ Sherpa မှအချက်အလက် ကောင်းစွာမဟာဗျူဟာဖော်ပြသည်။
ဤအချက်နှင့်ပါတ်သက်သည့်မှတ်စုတစ်ခုကအချက်အလက်များသည်ထပ်တူကျသောအကြောင်းအရာများကိုသတိမပြုမိပါ။ အကြောင်းအရာ duplicate သင်သည်မူလဆောင်းပါး၏အာဏာကိုတွန်းအားပေးရန် canonical link များကိုအသုံးမပြုပါကပြanနာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် Google ကအပြစ်မပေးပါ။
Tags: အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှုရင်ခွင်တံခါးစာမျက်နှာများအကြောင်းအရာပွား+ googleလျှို့ဝှက်စာကိုkeyword ကို stuffinglink ကိုဖလှယ်မှုlink စိုက်ခင်းများspam ကို linkထုတ်လုပ် seoအော်ဂဲနစ် seoလစာတိုးဘလော့ဂ်ပို့စ်များလစာလင့်များရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseoပါးလွှာသောအကြောင်းအရာ
မတ်လ 10, 2014 မှာ 7: 11 AM
အဆိုပါ infographics ဒေါက်ဂလပ်မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ၎င်းသည် Organic SEO ၏အခြေခံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာအားသာအကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည်။
ဒါဝိဒ်သည် Thompson က
မတ်လ 11, 2014 မှာ 9: 00 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်, ငါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုကြိုးကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အမှတ်ကြိုက်တယ်။ သင်၏ infograhpics မှညွှန်ပြသည့်အတိုင်းကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးခြင်းသည်ဂူဂဲလ်ကိုပျော်ရွှင်စေသည့်အပြင်အရေးကြီးဆုံးမှာစာဖတ်သူများကိုပျော်ရွှင်စေသောတန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်စာဖတ်သူများအကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကကြိုက်တယ်၊ တန်ဖိုးထားတယ်၊ ပြန်လာပြီးသူငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပို့တယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများစွာသည်မြန်ဆန်သောမဟာဗျူဟာများကိုသင်ကြားပေးနေသည်။ မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂျိမ်း Reynolds က
မတ်လ 15, 2014 မှာ 5: 26 AM
@ disqus_3MEg2e280Z အပေါ် - disqus! ရှာဖွေခြင်းတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ရေရှည်ပြplayနာဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ semantic web ပေါ်၌တည်မြဲသော SEO ရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမြန်ဆန်သောနည်းပရိယာယ်အနည်းငယ်ရှိသည်။
မတ်လ 15, 2014 မှာ 5: 12 AM
သင်၏စာဖတ်သူများအားဒေါက်ဂလပ်စ်နှင့်မျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသူတို့တန်ဖိုးကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်🙂 James ~ SEO Sherpa
မတ်လ 27, 2014 မှာ 9: 19 AM
တကယ်တော့အော်ဂဲနစ် SEO ကိုသာလိုက်နာသင့်သည်။ ထုတ်လုပ်လိုက်သော SEO သည်သင့်အားတိုတောင်းသောအောင်မြင်မှုရစေလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။ Organic SEO သည်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိစေသည်။
ဒီဇင်ဘာ 2, 2014 မှာ 2: 35 AM
၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည် keyboard stuffing နှင့် content ပါးလွှာမှုမရှိဘဲတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ် SEO ဖြစ်သည်။ ဒါကငါတို့အတွက်အသစ်အဆန်းပဲ၊ အားလုံးတလျှောက်လုံးလူများစွာသည်ထုတ်လုပ်သော SEO သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်နိုးထမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အော်ဂဲနစ်သည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုသင့်သည်။